﻿	Best Ground Turkey Pasta Sauce - Ezi Ntụziaka
cheesy hash aja aja Ezi ntụziaka na ude chiiz
taco mikpuo Ezi ntụziaka na beef
ite ọkụkọ na noodles facebook
Ala a pasta pasta ihendori bu ọgaranya, zesty, ma di mfe ime! Naanị ngwa ngwa ngwa ngwa na ihendori na-eme ka ọ dị ọgaranya.
Nke a bụ ezigbo ihe eji eme achịcha toki, nke zuru oke na pasta ma ọ bụ ọbụlagodi spaghetti skwọsh ma ọ bụ zucchini noodles . Tinye na salad n’akuku na achicha kororet maka nri zuru oke.
-esi mee ka Switzerland steak na aja aja gravy
Nri Nri Izu
Ntụziaka nke a bụ ọkacha mmasị ezinụlọ.
Ọ bụ nhọrọ ahụike ka ejiri ahịhịa turkey ma ala ọkụkọ na-arụ na usoro a kwa.
Ahụrụ m n'anya na oge njikere bụ ngwa ngwa ma ọ gachaa aka ka ọ na-akụ.
Ntụziaka a na-anụ ọkụ (ma na-agba oyi) mara mma nke mere nweere onwe gị ịghaghachi ụzọ abụọ.
Akụrụngwa na ọdịiche
N'ala Tọki Ground toki bụ protein zuru oke dị ala na nri a (ọkụkọ ala na-arụkwa ọrụ).
VEGGIES Yabasị na galik na ose mgbịrịgba na-enye ihendori nnukwu ekpomeekpo. Y’oburu na fodu vegetablesara n'ọkụ inine , tụba ha n'ime!
UMUAKA Anuahade tomato maka isi, diced tomato maka udidi, na tomato mado maka ndim.
AKW .KWỌ A na-agbakwunye ahịhịa ọhụrụ na njedebe nke isi nri maka nnukwu ekpomeekpo ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị gbanye ya, belata ego ahụ site na 2/3 ma tinye ha ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị na-eje ozi dịka ahịhịa ga-achọ obere oge iji rehydrate na ekpomeekpo ihendori.
achịcha efere itinye Ezi ntụziaka akwụkwọ nri atịchok
Otu esi eme ka ala Turkey pasta Sauce
Kwadebe otu ite a, usoro isi ite toki n'oge ọ bụla achọrọ pasta ma ọ bụ casserole.
Agba aja aja aja, yabasị, na galik na nnukwu ite.
Tinye ihe ndị ọzọ (kwa uzommeputa n'okpuru) ma weta obụpde.
Belata ọkụ ma gbanye ya ruo mgbe ọ ga-eto.
Na-eri nri dị na pasta, jiri cheese na Parmesan chọọ ya mma, echefukwala ije ozi n'akụkụ ya toast galik .
Chekwaa pasta pasta pasta ihendori n'ime igbe ekpuchi na friji maka ihe dị ka ụbọchị 4. Reheat na stovetop ma jee ozi dika achọrọ.
Maka ogbe nri , Mee ma ọ dịkarịa ala abụọ batches na ifriizi ke quart-sized zippered akpa na ụbọchị akara n'èzí. Turkey pasta ihendori ga-anọ ruo ọnwa 3 na friza, dị nnọọ ogologo iji nweta site na oyi!
Ground Turkey ọkacha mmasị
Cheesy Ground Turkey Pasta - creamy chee otu ite pasta
Nri anụ Turkey na-atọ ụtọ
Niile-Ebumnuche Turkey Meatballs
Kemmiri Turkey Burgers
You nwere ụtọ nke a Ground Turkey Pasta Sauce? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu okwu n'okpuru!
esi ebipụ a strawberry n'ime a rose
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri1 aka elekere iri na ise Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere 30 Nkeji Ọrụ6 iko Onye edemedeHolly Nilsson A na-ejikwa ụdị tomato atọ na ala dị mma abụba dị ala toro ala pasta ihendori ihendori. Bipute Ntụtụ
▢1 paụnd ala toki
▢1 buru ibu yabasị okpokoro
▢3 mkpụmkpụ galiki mebiri
▢28 ounce mkpọ diced tomato
▢28 ounce mkpọ tomato anuahade
▢¾ iko mmiri
▢1 buru ibu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbịrịgba okpokoro
▢3 tablespoons mado tomato
▢1 ngaji Oge Italian
▢½ ngaji nnu
▢¼ iko pasili ọhụrụ gbanwere
▢abụọ tablespoons basil ohuru gbanwere
Brown n'ala toki na yabasị na garlic ruo mgbe ọ bụla pink-anọgide. (Igbapu abụba ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa).
Tinye ihe ndị fọdụrụ (ma e wezụga pasili & basil) ntakịrị na-agbaji tomato. Da na obụpde, belata okpomọkụ na simmer ekwuchi 1 awa ma ọ bụ ruo mgbe ọ chọrọ agbanwe agbanwe.
Bido na pasili & basil.
Na-eje ozi n'elu pasta na-ekpo ọkụ.
Enwere ike dochie anụ anụ ọ bụla maka toki ala na ntụzịaka a. Tinye akwukwo nri kacha amasị gi, sie ha ngwa ngwa n’ime obere mmanu, ka ha tinye ha na ihendori. Nke a na-agbazi nke ọma, okpukpu abụọ (ma ọ bụ okpukpu atọ) Ntụziaka, ma chekwaa mgbakwunye maka nri n'ọdịnihu.
Na-eje ozi:1iko,Calorisị:180,Carbohydrates:22g,Protein:22g,Abụba:abụọg,Abụba Ajuju:1g,Cholesterol:42mg,Sodium:Ogbe 665mg,Potassium:Ogbe 1055mg,Eriri:5g,Sugar:12g,Vitamin A:941IU,Vitamin C:Ogbe 54mg,Calcium:119mg,Iron:4mg
Isiokwukasị mma Ground Turkey Pasta, Ground Turkey Pasta, Ground Turkey Pasta Sauce, Otu esi eme ka ala toki pasta ihendori N'ezieNri abalị, Pasta Esie ya.TalianEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .